Etu ị ga - esi melite arụmọrụ nke egwuregwu na Android | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi melite arụmọrụ nke egwuregwu na gam akporo
Paco L Gutierrez | | android, Mobiles, Nkuzi
N'ihi mkpọrọ a tụrụ anyị, ọ dịghị ihe ọzọ anyị ga-eme ma e wezụga ịchọ ntụrụndụ n'ụlọ. Enwere ọtụtụ ụzọ maka nke a na otu n’ime ha bụ Egwuregwu vidiyo. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere njikwa ma ya mere ihe ọzọ gị bụ iji ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba rụọ ọrụ, mana ọbụghị na ngwaọrụ ndị a niile egwuregwu kachasị ike na-aga nke ọma, ya mere, ọ bụghị afọ ojuju. Enwere ụzọ iji belata nsogbu a ntakịrị.
Oge a anyị na-ezo aka na ngwa dị na ụlọ ahịa ngwa Google. Na-akpọ Ndị na-egwu egwuregwu GLTool ọ nwere ike ịbụ ezigbo ngwa ọrụ maka ngwa niile ndị ahụ ọ na-esiri ike ịme egwuregwu na-aga nke ọma. Ọ bụ ngwa nke onye nrụpụta PUB Gfx + Ngwá Ọrụ mere nke na-egosipụta ngwa ọrụ GFX kachasị elu.
1 Gamers GLTool ezigbo maka imeziwanye arụmọrụ na egwuregwu kachasị amasị anyị.
2 O kwere omume nhazi na nhọrọ
2.1 Egwuregwu turbo
2.2 Egwuregwu tuner
3 Nhọrọ ịkwụ ụgwọ pro version
4 Nkwado Editor
Gamers GLTool ezigbo maka imeziwanye arụmọrụ na egwuregwu kachasị amasị anyị.
Okwu ndị ahụ nwere ike ịdị ka "Chinese" n'ọtụtụ ndị ọrụ "CPU, GPU ma ọ bụ RAM" ma ha na-ekpebi njirimara maka ezigbo ịrụ ọrụ nke ọdụ anyị ma ọ bụ kọmputa anyị. Ngwa a na - arụ ọrụ iji bulie akụkụ ndị a karịa ma gbakwunye akpaka egwuregwu mode. Ndị okike ngwa ahụ gosipụtara nke ahụ ha ejighi algọridim "AI" ma obu ihe yiri yaKama, ha na-anwa ime ihe kacha mma n’ekwentị.
Ozugbo ị mepere ngwa ahụ, ihe mbụ ọ ga - eme bụ nyochaa onye nhazi na nke GPU ọdụ anyị nwere. Dabere na nke a ọrụ nwere ike ịdị iche iche. N'okwu m ejiriwo m nhazi Qualcomm dị elu site na 2017 (Snapdragon 835), ya na GPU ya kwekọrọ Adreno (540). Site na panel a anyị nwere ike ịnweta ndepụta nke ngwa (wee họrọ nke anyị chọrọ iji rụọ ọrụ na ọnọdụ egwuregwu) na ọnọdụ maka ọrụ akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na anyị emee ngagharị anyị na-enweta na menu nke egwuregwu ụdịdị ntọala.
O kwere omume nhazi na nhọrọ
Anyị na-amalite site na-ezo aka na ọnọdụ 'Game turbo' nke ga - enyere anyị aka ịkwalite njirimara kachasị nke usoro egwuregwu ọdịnala.
CPU na GPU Boost: Niile nke CPU a na-ewepụ usoro ndị ahụ na - emetụta ya, yana usoro ndị chọrọ mgbalị site na GPU (ọ naghị ekwe omume mgbe niile iji gbanyụọ ha, na-adabere na oyi akwa nhazi). Nke a bara ezigbo uru na egwuregwu nke egwuregwu dị ọkụ nke na ha anaghị eme ka isi ihe niile rụọ ọrụ.
Hapụ ebe nchekwa RAM: A ga-ewepụ ngwa niile na-eri ihe dị n’azụ hapụ RAM niile ma mee ka ọ dị maka igwu egwu.
Nlekọta arụmọrụ sistemụ: Nke a ga - adọ anyị aka na ntị ma ọ bụrụ na ngwa ma ọ bụ usoro ọ bụla dị na ekwentị na - egbochi ọrụ nke egwuregwu ahụ anyị na - agba n’oge ahụ.
Ndị a bụ nhọrọ kachasị mkpa na usoro egwuregwu ọdịnala nke ga-ezuru kwalite arụmọrụ ka ịghara inwe nsogbu n'egwuregwu ọ bụla, mana ka anyị banye n'ime oke nhọrọ nke ngwa a na-enye anyị ohere.
Egwuregwu mkpebi: Podemos gbanwee mkpebi site na 940 × 540 (qHD) rue 2560 × 1440 (WQHD). Ọ bara uru ma ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka nwere mkpebi dị elu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka usoro ahụ megharịa na 2K mana egwuregwu ahụ zuru HD ma ọ bụ HD. Anyị kwesịrị iburu n’uche nke ahụ arụmọrụ egwuregwu ga-adị elu ma ọ bụrụ na anyị wedata mkpebi ahụ ọ bụrụgodị na ọ dị njọ.
Ihe eserese: Anyị nwere ike ịgbanwe otú e si sụgharịa ihe oyiyi egwuregwu. Gbazi onyunyo, textures na ndị ọzọ nke egwuregwu ahụ. Anyị nwere ike ịhọrọ textures na mkpebi dị elu, dị nro, HDR ... Dika esi eme ya na PC di ndu.
Nhọrọ nke fps (okpokolo agba kwa abụọ): Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ ihe osise kachasị mkpa egwu egwu, ebe ọ bụ na mmiri ahụ egwuregwu na-ebunye dabere na ya, Ọpụrụiche karịsịa na Shotters dị ka Fortnite, Oku ọrụ ma ọ bụ PUBG. Ọ ga-ekwe ka ebre na 60 fps ndị ekwentị na, kwa processor, nwere mmachi ọnọdụ na egwuregwu na 30 fps.
Ihe nzacha foto: Akara nzacha etinyere n'elu egwuregwu n'onwe ya. Ha na-eme dị ka ele anya maka egwuregwu ahụ. Anyị nwere ike ịhọrọ ihe nkiri, ezi uche, ọnọdụ ibi ndụ ... wdg.
Shades: na-ahapụ gị itinye ndò ndị ọzọ na egwuregwu na-akwado ya.
MSAA: Ntọala a dịkwa oke egwu na egwuregwu PC. Multisample mgbochi aliasing, bụ a smoothing Usoro iji melite ogo onyonyo.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè ọ bụrụ na anyị amanye Fps, shading na ndị ọzọ, mobile nwere ike ịta ahụhụ karịa ka ọ dị mkpa Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ obere / ọkara nso. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwale ntọala rue mgbe ịchọtara ihe kacha mma maka ngwaọrụ gị.
Nhọrọ ịkwụ ụgwọ pro version
Mgbanwe Ping site na mgbanwe DNS: Ọ na-enye anyị ohere ịgbanwe sava DNS site na ngwa ahụ iji gbalịa imezi ping maka egwuregwu ịntanetị.
Ping ule: Anyị nwere ike ịnwale ule site na ngwa ahụ na DNS dị iche iche iji chọta nke nwere ping kacha ala.
Ọnọdụ Zero-lag: A na-agbanwe ntọala egwuregwu na-akpaghị aka ka isi ihe mgbaru ọsọ wee belata lag.
Eserese maka obere njedebe: Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị dị ntakịrị, a na-etinye ntọala a kapịrị ọnụ ka o wee nwee ike ibugharị egwuregwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na anyị echebara nke ahụ echiche ngwa Pro dị ọnụ at 0,99Anyị na-akwado ịzụta ya n'echeghị echiche, ebe ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu n'ịntanetị, ping ma ọ bụ lag dị oke mkpa, yana ọ bụrụ na ngwaọrụ anyị adịghị ike iji mee ka egwuregwu dị mfe.
N'ebe a, anyị nwere ike ibudata nsụgharị ahụ GRATIS na PRO.
Anyị ga-eburu n’uche na ihe niile Ntọala ndị a na-emetụta ndụ batrị ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ, ihe abụọ ahụ jikọtara ya, ka ike na-achọ ka ọnụ ahịa ahụ dịkwuo mkpa, ka elu nke okpomọkụ na okpomọkụ dị elu, na-arịwanye elu oriri.
Nkwado m bụ na ka ebuli ka anyị we nwee nguzozi n'etiti njikarịcha na oriri, n'ihi na ọ baghị uru maka egwuregwu ahụ ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na batrị dị ntakịrị. A naghị atụ aro ka anyị tinye ọnụ ya n'ime chaja mgbe anyị na-egwu egwu, nke a nwere ike ibute oke nsogbu batrị n'ihi okpomọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi melite arụmọrụ nke egwuregwu na gam akporo
Xiaomi Redmi Rịba ama 9s bụ ọkwa ugbu a: ọnụahịa na nkọwapụta
Ngwaọrụ njirimara kacha mma